सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमणः सामाजिक सुरक्षामा कस्तो प्रभाव ?
प्रेम श्रेष्ठ बिहिवार, श्रावण १५, २०७७, १३:३५:०० मा प्रकाशित
काठमाडौँ । विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहँदा नेपालमा संक्रमणको दर उच्च देखिन थालिएको छ । बिहीबारको तथ्यांकअनुसार नेपालभर कोरोना संक्रमितको संख्या १९ हजार दुई सय ७५ पुगेको छ ।
कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्दै गर्दा ‘फ्रन्ट लाइन’मा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षाकर्मीमा कोरोना संक्रमणको दर क्रमिक रुपमा बढ्न थालेको छ । जसमा फ्रन्ट लाइनमा काम गर्ने सुरक्षा निकायको तिनै वटा विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ ।
यसमध्ये प्रहरी विभागमा दैनिक कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ । जसले आगामी दिनमा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापनमा कठिनाई हुने देखिएको छ ।
केही दिनयता प्रहरीको प्रमुख कार्यालय प्रहरी प्रधान कार्यालयका कर्मचारीहरुमा कोरोना संक्रमण देखिएको थालेको छ । यसअघि काठमाडौँको कलङ्कीमा रहेको प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत प्रहरीहरुलाई कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । बिहीबार बिहान प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत ९ जना सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भयो ।
अहिलेसम्म देशभर प्रहरी विभागमा मात्रै चार सयभन्दा बढी कर्मचारी संक्रमित भएका छन् । जसमा प्रहरी अधिकृत तहदेखि सामान्या कर्मचारीसम्म रहेका छन् । संक्रमित केही कर्मचारी निको भएर घर फर्किसकेका छन् । उपचारपछि घर फर्किएका कर्मचारी पुनः शान्ति सुरक्षाका लागि कार्यलयमा फर्किन सक्ने प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुँवेर कडायतले जानकारी दिए ।
‘प्रहरी विभागमा कोरोना संक्रमण देखिन थालिएको छ, यो ठूलो समस्या हो, तर हामी शान्ति सुरक्षामा कुनै कमी हुन दिदैनौँ,’ एसएसपी कडायतले भने, ‘कोरोना संक्रमणले कुनै एउटा पूरै कार्यालय सिल गर्नु पर्ने अवस्था आए पनि अर्को नजिकैको कार्यालयले थप जिम्मेवारी लिएर काम अगाडि बढाउने छौँ, कुनै अपराधिक घटना हुन दिँदैनौँ ।’
प्रहरी कार्यालयमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि उच्च सुरक्षाको विधि अवलम्बन गरिएको छ । उनका अनुसार नेपाल प्रहरी विभागमा अहिलेसम्म चार सय १ जना संक्रमित भएका छन् ।
यस्तै, सशस्त्र प्रहरीमा कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या ९३ पुगेको छ । मूलतः देशको सीमा क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण भएको हो । सशस्त्र प्रहरीलाई भारतबाट आएका नेपालीको उद्धारका क्रममा संक्रमण भएको सशस्त्रको भनाई रहेको छ । ‘भारतबाट धेरै नागरिक स्वदेश फिर्ता भए, उनीहरुलाई विधि सम्मत रुपमा स्वदेश फर्काउनका लागि सशस्त्र प्रहरी खटिएको थियो,’ सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता उप महानिरिक्षक राजु अर्यालले भने, ‘उनीहरुलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा कोरोना संक्रमित नेपालीबाट सशस्त्र प्रहरी विभागका कर्मचारीलाई संक्रमण भएको आँकलन गरेका छौँ ।’ संक्रमितमध्ये केही निको भइसकेको उनले जानकारी दिए ।
सुरक्षामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीलाई अनिवार्य रुपमा सरकारले लागू गरेको सुरक्षाका सामाग्री प्रयोग गर्ने उप महानिरिक्षक अर्यालले जानकारी दिए । सशस्त्र प्रहरी नागरिकसँग घुममिल हुनु नपर्ने हुँदा कम जोखिम रहेको छ । सुरक्षाका दुई निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण हुँदै गर्दा अर्को निकाय नेपाली सेनाका कर्मचारीहरुलाई पनि संक्रमण देखिएको छ । नेपाली सेनामा अहिलेसम्म ९७ जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
जसमा ७० जना पूर्ण रूपमा ठीक भएर काममा फर्किसकेका छन् । उपचाररत २७ जनाको अवस्था सामान्य रहेको सेनाले जनाएको छ । संक्रमितमध्ये धेरै जना क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा खटिएका रहेका छन् । संक्रमण रोक्न स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड सबै कार्यालयमा कडाइका साथ पालना गरिएको सेनाले जनाएको छ ।
नेपालमा सक्रिया सुरक्षा निकायको तीन वटा विभागमा कार्यरत कर्मचारीमध्ये पाँच सय ९१ जनामा कोरोना संक्रमण भएको छ ।
प्रहरी हेडक्वार्टरमा थप ९ जनामा कोरोना संक्रमण
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध एक भएर जाने खुमलटार बैठकको निष्कर्ष, प्रचण्डको पक्षमा फर्किए बादल सोमवार, श्रावण ५, २०७७, ०८:१६:००
किन आए रवि लामिछाने विवादमा ? बिहिवार, असार ७, २०७५, ११:२१:००